कैयौं अमेरिकी नेताहरुसँग यौ’नस’म्बन्ध भएकी महिला चिनियाँ जासुस भएको खुलासा – Sandesh Press
October 19, 2021 142
काठमाडौं। चीनको तर्फबाट अमेरिकामा भइरहेको जासुसीका विषयमा महत्वपूर्ण खुलासा भएको छ । चीनकी एक महिलाको पाँच वर्षसम्म अमेरिकाका कैयौं नेताहरुसँग यौनसम्बन्ध थियो ।
Prevट्याक्सीवालाहरु किन यति छाडा ? गाउँबाट काठमाडौँ आउँदा भन्दा ओर्लिएर कोठा पुग्न डबल भाडा ?
Nextसिमानामा चिनियाँ सैनिकविरुद्ध लड्न भारतीय सैनिकलाई करेन्टवाला त्रिशूल (भिडियोसहित)